मात्र २१ वटा सिक्काले चम्काउँछ तपाइको भाग्य ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मात्र २१ वटा सिक्काले चम्काउँछ तपाइको भाग्य !
काठमाडौं- सबैलाई आ आफ्नो समस्या हुन्छ , पैसाको अभावमा मानिस यता उता भौतारिरहेका हुन्छन् । तर हामीले ज्योतिषशास्त्रका केही नियम पालना गरेऔं भने पनि यसबाट छुटकारा पाउँन सक्छौ । तर त्यसको लागि शुद्ध मन भएर त्यस्ता विधि अपनाउन सक्छौं । प्रत्येकको घरमा सिक्का पैसा हुन्छ तर त्यसको के काम एक रुपैयाले केही आउँदैन भनी वेवस्ता गर्छो । त्यस्ता केही सिक्काले तपाई हाम्रो भाग्य बदल्न सक्छ ।
यदि यो विधि एक महिनामा एक चोटी , छ महिनामा एक चोटी वा वर्षको एक चोटी गर्न सक्यौँ भने पैसाको अभाव कहिल्यै हुँदैन भन्ने विश्वास शास्त्रमा लेखिएको छ । यो विधि आँैसीको भोली पल्टबाट गर्न सक्छौ । सर्वप्रथम २१ ओटा सिक्का लिने त्यो एक रुपैया होस् या दुई रुपैया तर २१ ओटा सिक्का एकै हुनुपर्छ । त्यसलाई साबुन पानीले राम्ररी धुने । किनकी त्यसमा धेरै व्यक्तिको इनर्जी हुन्छ । धेरैले छोएको हुन्छ ।
यसरी धोएपछि सफा कपडाले पुछ्ने अनि एउटा काँचको बट्टामा लिनुहोस् सबै सिक्का त्यही बट्टामा राखेर बिर्को लगाइदिनुहोस् र औँसीको भोली पल्ट शान्त ठाँउमा शान्त भएर पुजा कोठामा बस्नुहोस् र उत्तर दिशामा बट्टालाई राख्नुहोस् , अनि एउटा सिक्का दाहिने हातमा राखी मुठी पारी ‘ऊँ एम हिम क्लिम चामुन्डाय लक्ष्मीयो भिक्ष्य नम’ उच्चारण पाँच पटक आँखा चिम्म गरेर भन्ने त्यसपछि त्यो सिक्का बट्टामा राख्ने । साँझ बिहान जुनबेला गर्दा पनि शुद्ध भएर गर्ने २१ दिन सम्म यही मन्त्र भनेर एउटा सिक्का दाहिने हातमा लिएर आफ्नो इच्छाएको कुरा गर्ने पैसासँग सम्बन्धि समस्या भन्ने जब २१ दिनमा आउँछ त्यो दिन पनि गर्ने २१ दिनमा त्यो सिक्का राखेको बट्टामा सफा पानी राखेर भर्ने त्यो बट्टा चन्द्रमाको उज्यालो पर्ने गरी घर बाहिर कसैले नदेख्ने गरी राख्ने ।
भोली पल्ट नुहाएर सफा कपडा लगाई त्यो सिक्का राखेको बट्टालाई घर भित्र ल्याउने र त्यसको पानी घरको कुना कुनामा छर्कने , साथै आफ्नो धन सम्पति राख्ने तिजोरीमा पनि र्झकने । त्यसपछि त्यो बट्टाको सिक्का आफ्नो घरमा सबै सदस्यहरुको पर्समा राख्ने । आफ्नो इच्छा अनुसार जतिओटा राख्दा पनि हुन्छ । बाँकी भएको सिक्कालाई आफ्नो घरको दराज ,ढुकुटी तथा किजोरी मा राख्ने ।
यसरी यो बिधी २१ दिन सम्म गर्ने तर यो कार्य गर्दा कसैलाई थाहा नदिई गर्नुपर्छ । घरका सदस्यलाई पनि थाहा नहोस् । यसरी यो विधि गरेमा तपाईको पैसाको कारोवार , व्यापारमा भएको घाटा, पैसाको अभाव विस्तारै हटेर जान्छ ।